डबल बेड सनी: किरा, मानक आकार
डबल बिस्तर - एक अत्यन्तै व्यापक माग आकार सेट गर्छ। उत्तिकै व्यावहारिक डबल रूपमा यसको प्रयोग, र एकल बेड छ। त्यसैले बहु-उद्देश्य यस्तो किरा लागि लगातार उच्च मांग राख्छ।
गरेको मानक के हेरौं आकार डबल बेड सनी यस्तो उत्पादनहरु को चयन को सुविधाहरू विचार, अब उपलब्ध उपभोक्ता दर्शक छन्।
साटन को डबल सेट
यो अत्यन्तै डबल बेड सनी, साटन प्रेरित उत्पादन को लागि प्रयोग गरिन्छ कि साधारण सामाग्री छ। कपडा फरक विशिष्ट बुनाई फाइबर, तन्यता बल उच्च स्तर बढाउँछ जो। साटन देखि उत्पादन एक उत्कृष्ट सौंदर्य र व्यावहारिक गुणहरू छन्।
विशेष घरेलू बजार मा मांग मा percale एक डबल बेड सनी "Verossa" उठाउँछ। उच्च-बल प्रयोग कपडे साटन यार्न डबल बुनाई को उत्पादन को लागि। सामाग्री उच्च घनत्व र एक महान चमक साँच्चै परिष्कृत उपस्थिति possesses।
सन देखि ओछ्यान तन्ना
राम्रो सिद्ध सनी कपडे। भौतिक चिस्यान र अधिकतम तापक्रम विनियमन को कुशल हटाउने सुनिश्चित गर्दछ। डबल बिछ्यौना सन बनाइएका, छाला जलन पैदा गर्दैन घटक एक एलर्जी प्रतिक्रिया प्रकुपित गर्न सक्षम छन् जो समावेश छैन। सामाग्री मात्र बेफाइदा - नियमित washings फलस्वरूप मूल संरचना को एक तीव्र हानि। त्यसैले, उत्पादनहरु सन फाइबर अक्सर कृत्रिम complemented को स्थायित्व सुनिश्चित गर्न।
डबल रेशम अंडरवियर
रेशम किरा उत्कृष्ट दृश्यहरु र अद्वितीय आकर्षण छ। को स्लाइड प्रभाव - उच्च स्थायित्व र प्रभावशाली सेवा जीवन बावजुद सामाग्री एक ससर्त को बेफाइदा छ। त्यसैले, सबै उपभोक्ताहरु यस्तो निर्णय को व्यावहारिकता बुझ्न सक्षम छन् छैन।
डबल बेड सनी प्राकृतिक रेशम बनेको - अति महंगा छ। तथापि, सौंदर्य अपील र यी उत्पादनहरु को अद्वितीय गुण पूर्णतया आरामदायक बाँकी र पूर्ण विश्राम योगदान।
डबल बेड सनी, एक लोचदार ब्यान्ड संग ओछ्यानमा पानाहरू
अक्सर उपभोक्ताहरु सोध्दै हुनुहुन्छ: "के व्यावहारिक पाना: मानक वा लोचदार ब्यान्ड" सबैभन्दा किरा साधारण पाना, को गद्दा अन्तर्गत र्याप छ जो संग उपलब्ध छन्। यस्तो बानी Housewives प्रयोग गर्न सजिलो र मर्मतका, धुन र इस्त्री गर्न सजिलो हुन्छ। तथापि, मानक पानाहरू छैन कमियां बिना छन्। उदाहरणका लागि, प्रारम्भिक बिहान आफ्नो निद्रामा घुमाउरो प्रयोग गरिन्छ जो प्रयोगकर्ता अक्सर खुला गद्दा मा बायाँ छन् र एक पाना भुइँमा छ।
हामी एक लोचदार ब्यान्ड संग पानाहरू कुरा भने, उत्तरार्द्ध सुरक्षित रूपमा गद्दा अडिएको छ, चाँडै कडा र मिलेका। परिणामस्वरूप सतह चिल्लो ओछ्यानमा Folds को devoid छ। आराम एक लोचदार ब्यान्ड संग पानामा आराम गर्न। तर यो वर्ग वस्तुहरू इस्त्री प्रक्रिया कठिन हुन सक्छ।
एक लोचदार ब्यान्ड संग एक पाना को लाभ को एक नम्बर भए तापनि सकारात्मक गुणहरू र एक मानक उत्पादन छ। तसर्थ, ध्यान दुवै विकल्प दिनुपर्छ, र आफ्नो विकल्प व्यक्तिगत प्राथमिकता र सुविधा मा निर्भर गर्दछ।
ओछ्यान तन्ना एक डबल सेट को आकार - मानक
वर्तमान मा कुनै वर्दी मानक वर्गीकरण मापदण्डहरू दुवै घरेलू र विदेशी निर्माताहरु बीचमा डबल सेट छ। तर, स्टोर को सबै भन्दा तपाईं निम्न आयाम संग डबल बेड सनी हेर्न सक्नुहुन्छ:
duvet कवर - 175x215 सेमी;
पाना - 214x220 सेमी;
pillowcase - 70x70 सेन्टिमिटर वा 50x70 सेन्टिमिटर।
सबैभन्दा प्याकेजहरू एक सेट योजना, निर्दिष्ट गर्दछ समावेश: खुट्टामीटर constituting को वस्तुहरु, रंग, निर्माण सामाग्री, प्रयोग रङहरू प्रकृति, आदि ..
बिक्री अक्सर दुई कम्बल कवर संग डबल सनी देख्न सकिन्छ। यस्तो उत्पादनहरु विशेष आधुनिक आयोमी ऊन, पलिएस्टर फाइबर र सिलिकन कंबल को स्तर अनुसार डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। सामान्य दुई यस्तो सेट सट्टा अक्सर चार फरक आकार pillowcases समावेश गर्दछ।
त्यहाँ बेईमान निर्माताहरु को एक धेरै नम्बर उत्पादन को आकार घटाउने, भौतिक मा सुरक्षित गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ जो छन्। अक्सर यी प्याकेजहरू मा एक चिन्ह अस्पष्ट सर्तहरू को एक नम्बर संग "यूरो डबल" समावेश गर्दछ। त्यसैले, यो एक नाप्ने मीटर प्रयोग यस्तो किरा चयन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
छोटकरीमा उत्पादन देशहरूमा मा
रूसी निर्माताहरु उपभोक्ता व्यापक दायरा र मूल्य दायरामा डबल सेट पेशकश गर्दै छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो अग्रणी स्थिति घरेलू बजार मा टर्की उत्पादनहरु ओगटेको छ। यसको स्टाइलिश डिजाइन, रंग को एक किसिम, किफायती मूल्य पहिलो स्थानमा यस्तो उत्पादनहरु आकर्षित।
थप प्रतिष्ठित स्थिति स्पेनिश ब्रान्डहरु को सम्मानित उत्पादनहरु छ। उत्पादन यस श्रेणीका मुख्य रूप, सेट प्रतिनिधित्व गर्दै बारोक तत्व संग एक शास्त्रीय शैलीमा सजाया।
निर्माण डबल बेड सनी को क्षेत्र मा रियल trendsetters इटालियन कम्पनी हो। डिजाइनर, नथाकीकन नवीन निर्माण प्रविधि embodying, नयाँ संग्रह विकास गर्न काम। यस्तो उत्पादनहरु साँच्चै उच्च गुणवत्ता छलफल र उपयुक्त लागत छ छन्।
एक दुइ सेट को उपयुक्त आकार कसरी निर्धारण गर्ने?
ओछ्यान तन्ना खरीद गर्न अघि बढ्नु अघि, ठीक सिफारिस खाट को चौडाई र लम्बाइ मापन। पाना एक राम्रो-चुनिएको मापदण्डहरू राति ओछ्यानमा ल्याइने देखि यो हटाउनु र निरन्तर तल्ला किनारा वस्तुहरू टिप्न आवश्यकता खत्म।
मापन आवश्यकता र duvet कवर। यसको मानकहरु कम्बल भन्दा ठूलो हुनेछ भने, उत्तरार्द्ध निद्रामा र बाँकी समयमा प्रयोगकर्ता बेचैनी पैदा, बाहिरै जारी हुनेछ। एकै समयमा भद्र आकार duvet कवर मा छैन सधैं कम्बल को क्लासिक संस्करण समायोजित गर्न सक्षम छ। त्यसैले, यो आवश्यक छैन फेरि उत्पादनहरु को खरीद मा सुरक्षित छ।
एक बाँकी मुख्य आवश्यकता - पूर्ण सुरक्षा र सान्त्वना एक भावना। त्यसैले, एक डबल बेड सनी प्राथमिकता चयन गर्दा कपडा, रंग प्यालेट प्रकार र गुणस्तर दिइएको हुनुपर्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण - को मापदण्डहरु र तत्व को अनुपात सेट ओछ्यानमा: duvet कवर, पानाहरू र pillowcases।
टाइटेनियम चुम्बकीय कंगन, "Tiens": ग्राहक समीक्षा
बच्चा कार सीट "Romer" को मर्यादा। सुविधाहरू मोडेल
Carriages Reindeer: समीक्षा र फोटो
ओवन मा जार कसरी जीवाणु रहित बनाउनु गर्न - हाम्रो हजुरआमा को एक सरल विधि सिक्न!
एक बिजुली स्तन पंप के छ। विवरण र समीक्षा
प्लास्टिक बोतल देखि स्टाइलिश फूल
बिजुली cooktop। hobs को प्रकार। लाभ र ग्लास-माटोको पकाउने सतह बेफाइदा
को स्पार्क प्लग मा रातो वा कालो कार्बन जम्मा: कारणहरू
पाठ्यक्रम। व्यक्तिगत पाठ्यक्रम
सुन्दर फूल को नाम सिक्न - तिनीहरूले कम कुनै सुन्दर र रहस्यमय छन् ...
सेवा «Aeroflot», S7: विमान मा बच्चा सँगैको। नियम समीक्षा
"आइसोबार" - उच्च रक्तचाप लागि उपचार। दबाइ को प्रयोगको लागि निर्देशन
तीव्र urticaria के हो?
विधि र उपकरण: तनाव कसरी कम गर्न
लोकतन्त्र र आफ्नो विवरण को प्रकारका
पार्क "ANGARA ponds": आधुनिक मनोरञ्जन संग हरियो मनोरञ्जन क्षेत्र सबै स्वाद अनुरूप